Qaban qaabada shirka Dhuusamareeb 3 ayaa si habsami leh u socda iyada oo la filayo in… – Hagaag.com
Qaban qaabada shirka Dhuusamareeb 3 ayaa si habsami leh u socda iyada oo la filayo in…
Posted on 16 Agoosto 2020 by Admin in National // 0 Comments
Waxaa saakay ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug qabanqaabada shirka Dhuusamareeb 3 oo ay yeelanayaan madaxda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada .
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay gaaray halkaas, iyadoo sidoo kale ay tegeen Dhuusamareeb madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, waxaana hadda ku sugan magaalada xubno kamid ah xildhibaannada Baarlamanka iyo sidoo kale wasiirro ka tirsan dowladda iyo maamul goboleedyada.
Shirkaan ayaa waxaa lagu wadaa in lagu gorfeeyo arrimaha doorashada soo socoto iyo sida Soomaaliya ay u wajaheyso, waxaa sidoo kale la iskula soo qaadayaa hannaanka ay doorashadu noqon doonto.
Dad badan ayaa saadaalinaya in ay yartahay rajada is Af-garad ee kasoo bixi karo shirkaasi, iyagoo taasi ay u sababeeyeen khudubadii uu shalay madaxweynaha Soomaaliya ka jeediyay Baarlamanka oo uu ku sheegay in Soomaaliya ay muhiim tahay in dowladnimada dadka loo dhoweeyo. Taas oo lagu sheegay in micnaheedu yahay in uu ku qanacsanyahay qabashada doorasho qof iyo cod ah.